Rosiana manjavona: zava-misy 5 tsy fantatrao momba ny Lana WWE - Wwe
Rosiana manjavona: zava-misy 5 tsy fantatrao momba ny Lana WWE
Ny Rosiana ravishing dia nanao dia lavitra tao amin'ny fahitalavitra WWE hatramin'ny nanombohany ny laharam-pahamehana tamin'ny taona 2013. Niara-niasa tamin'i Rusev tamin'ny voalohany i Lana nandritra ny fotoanany tao amin'ny NXT ary toa nifaoka azy mivady ireo raha mbola teo am-pandrosoana.
Nanambady izy mivady, niseho tamin'ny Total Divas, ary nisara-panambadiana tao amin'ny fahitalavitra WWE rehefa nanomboka fifandraisana tamin'i Bobby Lashley i Lana. Mazava ho azy, io dia ampahany tamin'ny lalan'ny tantara ary navoaka tamin'ny WWE TV i Rusev. Amin'ny tena fiainana dia mbola manambady i Lana sy Rusev, saingy tsy ao anatin'ny orinasa intsony ny duo.
Hatramin'ny nialan'i Rusev dia nampiasaina tamin'ny Lana Alatsinainy alina RAW i Lana saingy afaka nandany an'i Lashley ny lalao tany Backlash ny faran'ny herinandro lasa teo talohan'ny nanapahan-kevitr'ilay Theighty fa te hisaraka izy amin'ity herinandro ity amin'ny RAW.
Nanesoeso i Lana hanatevin-daharana an'i Natalya hatramin'ny nanaovan'ilay kintana NXT teo aloha fa mpitantana mahafinaritra nefa mbola hanambara ny drafitra ho avy. Manoloana izay mety ho volana vitsivitsy manaitaitra an'i Lana, ireto misy ny zava-misy tsy dia fantatra loatra momba ny kintana.
# 5. Niady mafy tamin'ny aretina misakafo i Lana
Ataovy izay maha-ianao anao anao ary lazao izay tsapanao satria izay manadino tsy maninona ary ireo izay tsy maninona tsy maninona 🤍 #wwebacklash
mahatsapa ho safidy amin'ny fifandraisana
Lahatsoratra zarain'i CJ Perry (@thelanawwe) ny 14 Jun 2020 amin'ny 5:26 hariva PDT
Lana dia mety ho hita ho iray amin'ireo vehivavy tsara tarehy indrindra amin'ny karamain'ny orinasa amin'izao fotoana izao, saingy tsy midika izany fa tsy nanana ny tolona nataony tamin'ny endriny nandritra ny taona maro izy. Sahala amin'ny kintana WWE namana Alexa Bliss, i Lana koa dia niady tamin'ny aretina misakafo taloha.
Hoy ilay kintana Lilian garcia fa variana amin'ny lanjany izy ary hametra ny kaloria 400 isan'andro isan'andro alohan'ny hidirany hopitaly tamin'ny faha-17 taonany.
Nantsoina hoe matavy aho. Fony aho 14, 90 kilao aho ary toy ny 5'4 ″. Nilaza izy ireo fa lehibe loatra ny vodiko ary hanome ahy fanazaran-tena aho [mpampianatra ballet] hanandrana hanary ny vodiko. Tena nanana aretina ratsy tamin'ny fihinanana aho. Nentina tany amin'ny hopitaly aho tamin'izaho 17 taona. Bulimic aho. Anorexika aho. Nanisa ny kaloria aho tamin'izaho 14 taona. Tsy nihinana kaloria mihoatra ny 400 isan'andro aho. Ny hohaniko na hosotroiko dia ny Diet Coke, na ny kafe, ary manana sôkôla kely aho. Tena tsy salama aho ary nafeniko tany amin'ny reniko izany satria ny reniko, raha fantany, dia mety hitondra ahy hiala amin'io sekoly io. Izay no atahorany lehibe indrindra sao hanome ahy aretina misakafo izao tontolo izao. Nanana aretina lehibe teo amin'ny fihinanana aho.
Nandresy ny aretina i Lana nanomboka teo saingy mbola miady amin'ny sarin'ny vatana sy ny valiny sasany azony avy amin'ny WWE Universe tao amin'ny media sosialy.
lisitry ny zavatra mahaliana ny olona
ahoana no ahafantarako raha misy olona tiako
manao ry zalahy izay matoatoa hiverina
Inona no hevitry ny hoe ho Faritany